महुलीको ५०% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन, समायोजनपछि कतिमा खुल्यो कारोबार ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » महुलीको ५०% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन, समायोजनपछि कतिमा खुल्यो कारोबार ?
काठमाडौं - महुली सामुदायिक लघुवित्तको ५०% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन गरेर प्रतिकित्ता १३ सय ७१ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस अनुसार, आज कम्पनीको पहिलो कारोबार १३ सय ७१ रुपैयाँलाई आधार मोनर खुलेको हो । महुलीको औसत आधार मूल्य ७३५ रुपैयाँ हो । मंसिर ९ गते साधारण सभा गर्नको लागि महुलीले आइतबारदेखि बुक क्लोज गरेको हो ।
कम्पनीले सभामा १०% नगद लाभांशका साथ बोनसपछि कायम हुने पुँजीमा ५०% हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पनि पेस हुनेछ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा महुलीले ४ करोड ३१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । यसको प्रतिसेयर आम्दानी १०७ रुपैयाँ ९२ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ ४४६ रुपैयाँ १५ पैसा छ ।